TTSweet: ရခိုင်မုန့်တီ (အာပူလျှာပူ )
Posted by T T Sweet at 12:29 PM
Labels: (၁ ၀၀) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***, (၁-၂၁) ရခိုင်မုန့်တီ (အာပူ၊လျှာပူ)
ရခိုင်မုန်တီ ၂ မျိုးကွဲတယ်ဗျ . စစ်တွေ ဘက်က ပဒဲကောသုံးတယ်
ကျောက်ဖြူဘက်က ငရုတ်ကောင်းသုံးတယ်။ ငါးပြုတ်ရင် နံနွင်းမုန့်မထည့်ဘူး။ ငရုတ်သီးအရင်ပြုတ်ပါတယ်။ ကျတ်သွားတော့ ဗိုက်မနာတော့ဘူးပေါ့။ ရလာတဲ့ ငရုတ်သီးကို ကြိတ်ပီး မွှေလို့ရလာတဲ့အနှစ်ကို ငပိ။ ငါးအနည်းငယ် ဆီအနည်းငယ်နဲ့ ငရုတ်သီးချက် ချက်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီမထည့်ပါဘူး။
T T Sweet November 5, 2012 at 4:00 PM
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုပေတူး။ ကျွန်မတော့ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ချက်စားလာတာ။ တကယ့် ရခိုင် အစစ်နဲ့ နဲနဲတော့ ကွဲမှာပေါ့။ ဗမာဆိုတော့ ဆနွမ်းမှုန့်က သုံးနေကျဆိုတော့ ညှီမှာကြောက်လို့ဂျ။ ဗမာ ရခိုင် ကပြား မုန့်တီချက် ပေါ့။း)) နောက်တစ်ခါ ရခိုင်ချက်အတိုင်း ချွတ်စွတ်တူအောင် အပေါ်ကနည်းအတိုင်း try ကြည့်ပါ့မယ်ဗျာ။
ကျတော်လည်း ရခိုင် ဗမာ ကပြား (ဖီးကြမ်း)ပါ..
ပဲကပ်ကြော်တို.၊ပဲမှုန်.တို.၊ ဂေါ်ဖီတို. က တကယ်.ရခိုင်မုန်.တီလက်သုတ်မှာ ထည်.သုတ်လေ.မရှိဘူး။
ပြီးတော.လေ ရခိုင်မုန်.တီချက်ရင် အကောင်းဆုံးငါးက ငါးရွှေပါ။ သြဇီ မှာရနိုင်မလားတော.မသိဘူး။ ငါးရွှေရရင် တခါလောက်ငါးရွှေနဲ.စမ်းချက်ကြည်.ပါ။ တခြားငါးတွေနဲ.ချက်တာနဲ.မတူပါဘူး။
Vista November 5, 2012 at 5:54 PM
ငါးရွှေနဲ့ ချက်တာ အကျိုးနဲ ကောင်းတယ် ..တီဆွိရေ ..conger eel ဆိုပြီးရှာ အနော်လည်း ကဒီဘီပြောလို့ ချက်ကြည့်တာ အရမ်းကောင်းတယ်
T T Sweet November 5, 2012 at 6:10 PM
ငါးရွှေနဲ့ စင်္ကာပူုမှာတော့ ချက်ဖူးတယ်။ ဒီမှာတော့ ရှာရခက်လို့ လွယ်တဲ့ ငါးနဲ့ပဲချက်လိုက်တာပါ။
win win san November 5, 2012 at 10:42 PM
Natthame November 5, 2012 at 10:46 PM
T T Sweet November 5, 2012 at 11:01 PM
1:14 PM (9 hours ago)
mstint has leftanew comment on your post "ရခိုင်မုန့်တီ (အာပူလျှာပူ )":
ရခိုင်မုန့်တီ လူ၅၀စာအတွက် ချက်နည်းလေး ယူသွားတယ် ဆွိတီရေ ကျေးဇူးနော်း)
ကထိန်အတွက် အလုပ်လုပ်သူတွေကို ကျွေးမွေးတာမို့ ဒါလဲ ထူးမြတ်တဲ့အလှူတစ်ခုပဲပေါ့နော်။
အနောနိမတ်မတ် November 6, 2012 at 12:28 PM
ရေခဲရိုက်ထားတဲ့ငါးက အချိုပေါ့တာအပြင် အာဟာရရော ကွာသေးလား တီဆွီ။
T T Sweet November 7, 2012 at 6:15 AM
အန်တီဆွိ ဂူဂဲလ်ကြည့်တာတော့ မကွာဘူးပဲရေးထားတာတွေ့တယ်။
၀ါဝါ November 7, 2012 at 11:10 AM
ကျနော်ကတေနာ့ ငါးက အဲ့လိုမရလို့ ငါးဗူကိုပဲ ထည့်လိုက်တယ်။
မန့်ပီးမှ အပေါ်က မန့်တာတွေ ပြန်ဖတ်တာ....
သူတို့က ရခိုင်မှာလဲ ချက်ပုကွဲတယ်။
ငရုတ်ကောင်း ပဒုကော ထည့်သူ မထည့်သူတွေ။
ကော်ဖီမထည့်ပဲ ငရုတ်သီးစိမ်းအနှစ်နဲ့ထည့်တာက ရခိုင်သုတ်
ရခိုင်သုတ်က ဆီချက်မထည့်ဘူး.ဒါလဲ နေရာအလိုက် နဲနဲကွဲတဲ့ ထည့်တာတွေ ရှိတယ်တဲ့
Anonymous November 9, 2012 at 1:45 AM
ရခိုင်အစစ်ကတော. ပဲမှုန်.တွေ ဆီတွေ အကြော်တွေမထည်.ဘဲ အစိမ်းသုတ်ဆိုလား
Unknown July 13, 2017 at 2:09 PM